नेपाली भुमिमा भारतीयको बलमिचाइँ, पुरानो पिलर ओझेलमा पाररे नयाँ ! « Drishti News – Nepalese News Portal
नेपाली भुमिमा भारतीयको बलमिचाइँ, पुरानो पिलर ओझेलमा पाररे नयाँ !
१९ चैत्र २०७७, बिहिबार 7:22 am
भाँड्सर नेपाल–भारत दशगजा नजिकको गाउँ हो। २०४२ सालमा दुई देशका नापजाँच गर्ने टोली आएर नयाँ पिलर नेपालतर्फ गाडिदिएको हकको दाबी छ । भारतीय पक्षले नेपालतर्फ नयाँ पिलर गाड्दा नेपाली टोलीले प्रतिवादसमेत नगरेको उनले बताए ।
‘हामी बोलेका हौं तर हामीले बोलेको कसैले सुन्दैन,’ उनले भने, ‘हामी सीमामा बस्नेलाई पारिबाट हेपेको अनुभव हुन्छ ।’, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।